FAQs - Shandong Glorious Laser Technology Co., Ltd.
Mashiinka Goynta Xashiishka Laser-ka
Tube & Dhuumaha Laser Goynta Mahine
Mashiinka Goynta Laser-ka ee labada-la isticmaalo
Mashiinka Goynta Laser Power Sare
Mashiinka Calaamadaynta Laser
Mashiinka xardhitaanka laser
Waxaan ka jawaabeynaa dhammaan su'aalahaaga.
Inta ugu badanInta Badan La WeydiiyoSu'aalo.
Ku soo ururay FAQ-keena.Gaar ahaan adiga.
Mashiinkan waxba kama ogayn, mashiin noocee ah ayaan dooranayaa?
Aad bay u fududahay in la doorto.Kaliya noo sheeg waxaad rabto inaad sameyso adigoo isticmaalaya mashiinka CNC laser, ka dibna aan ku siinno xalal qumman iyo talooyin.
Markii aan helay mashiinkan, laakiin ma garanayo sida loo isticmaalo.Maxaan sameeyaa?
Waxaan soo diri doonaa muuqaal iyo buug-gacmeed Ingiriisi ah oo wata mishiinka.Haddii aad weli shaki qabto, waxaan ku wada hadli karnaa taleefoon ama skype iyo iimayl.
Haddii ay jiraan dhibaatooyin ay ku dhacaan mashiinkan inta lagu jiro muddada dammaanadda, maxaan sameeyaa?
Waxaanu bixin doonaa qaybo bilaash ah inta lagu jiro wakhtiga dammaanadda mishiinka haddii mishiinka uu leeyahay dhibaatooyin.Iyadoo aan sidoo kale bixinno adeegga nolosha dheer ee bilaashka ah ee adeegga iibka ka dib.Markaa wixii shaki ah, kaliya noo soo sheeg, waxaanu ku siin doonaa xal.
Inta aadan ii soo dirin su'aal ku saabsan laser-kayaga fiber-ka, waxaa kuu wanaagsan inaad isiiso macluumaadka soo socda
1) Cabbirkaaga birta ama aan biraha ahayn.Sababtoo ah warshadeena, waxaan ku haynaa noocyo kala duwan marka loo eego goobta shaqada.
3) Ma doonaysaa in aad xardho ama jarto?Haddii la gooyo, ma ii sheegi kartaa dhumucda goyntaada?Sababtoo ah dhumucda goynta kala duwan waxay u baahan yihiin korantada tuubada laysarka ee kala duwan iyo alaab-qeybiyaha korontada laysarka.
Sida loo shaqeeyo mashiinka?
Waxaan kuu soo gaarsiin doonaa buug-gacmeed Ingiriisi iyo muuqaal mashiin wata.Haddii aad weli u baahan tahay caawimadayada, fadlan nala soo xidhiidh.
Sideen ku heli karaa muunada si aan kuugu eego tayada?
Haddii aad rabto inaad calaamadiso muunadda si aad u hubiso tayada, waxaanu kaa caawin karnaa inaad tan sameyso.marka hore waxaad u baahan tahay inaad na siiso astaanta ama naqshadeynta, muunado calaamad bilaash ah ayaa lagu bixin karaa.
Mashiinka ma lagu beddeli karaa si waafaqsan shuruudahayga?
Hubaal, waxaan leenahay koox farsamo oo xoog leh oo waxaan leenahay khibrad qani ah.Hadafkayagu waa inaan ku qancino.
Ma ii diyaarin kartaa shixnadda?
Waxaan u diyaarin karnaa shixnadda macaamiishayada xagga badda ama hawada.Shuruudaha ganacsiga FOB, CIF, EXW ayaa diyaar ah.
No. 227, Jiangdu Road Weifang Shandong Shiinaha
Gooyaha Laser-ka ee xaashida, Alxanka Tooska ah ee Laser, Mashiinka Cnc Laser, Laser Cnc Machine Iibka, Kaarboon Fiber Laser Cutter, Alxanka dahabka,